Nooca Akhlaaqda Wanaagsan waa font ay ku qarinayso ereyada xunxun | Abuurista khadka tooska ah
Nooca Asluubta waa nooc cusub oo lagu garto "labbis" ama "asturid" ama "qarin" ereyo gaar ah dhawaaq xun sida tan: *****. Qaado qiyaas yar oo waad fahmi doontaa malaha ereyga wuxuu yahay.
La hanad ka dambeeya fikraddan font waa faallo, maadaama isha ay mas'uul ka tahay "ku dhuumashada" nooc nacasnimo ah ereyadaas xun. Websaydhkooda waxaad ku tijaabin kartaa inay arkaan sida ay u qarineyso oo ay u abuureyso dareen ah inaynaan aqrin, laakiin maskaxdeenna waxay u egtahay sidii ay ahayd.
Nooca Asluubta waa font oo ay abuurtay shirkadda tiknoolajiyadda Finland ee TietoEVRY yaase mas'uul ka ah sixitaanka ama qarinta ereyadaas mararka qaar noo soo baxa, laakiin waa maxay waxay yihiin.
Laakiin waxaa jira ujeedo ka dambeysa abuurista tan nooca qoraalka oo wuxuu ku saabsan yahay xoog u sheegashada internetka in dhalinyarada ka helaan shabakadaha bulshada. Waxay ku taal isla bogga Websaydhka Nooca Akhlaaqda ah ee aad ka akhrisan karto: «Waa font il furan oo dib u qorta ereyada waxyeellada leh si loogu beddelo kuwo kale oo badan oo loo dhan yahay. Waxaan dooneynaa inaan abuurno meel loogu talagalay doodaha muhiimka ah ee ku saabsan sida adduunka looga dhigi lahaa meel ammaan ah, oo loo wada dhan yahay qof walba.
Xaqiiqdii, "Waad foolxun tahay" waxay noqotaa "Dhaqan ahaan ma aad qurux badnayn", halka tibaaxaha sida ****** ay gebi ahaanba mugdi ku jiraan si aan loo fahmin; In kasta oo wixii la yidhi, haddana way iska ciiraan laakiin innaga dhexdeenna ayay ka muuqataa ereygu waa. Waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu fiican ee qoraalkan oo aad heli karto boggaaga.
Font-kan ayaa lagu daraa, intaas ka sokow astaan ​​cusub oo aan diirada lasaarin, font Opentype (OTF) in aad aqoonsan karto oo aad ka heli kartid beddel ku habboon ereyada iyo weedhaha xadgudubka ah ee dukaanka buugaagta ee ka shaqeeya qadka iyo khadka tooska ah. Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad soo dejiso. Waan arki doonaa sida ilahaani u horumarsan yihiin oo wax badan is siin kara. Hadana adigoon jiidi karin fartaan qaaliga ah ee IKEA.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Font-kan qarinaya ***** waa wax weyn